Hoobiyaashii lagu weeraray madaxtooyada soomaaliya oo la xaqiijiyey inlaga tuuray degmada boondheere – STAR FM SOMALIA
Hoobiyaashii lagu weeraray madaxtooyada soomaaliya oo la xaqiijiyey inlaga tuuray degmada boondheere
Maamulka Degmada Boondheere Ee Gobolka Banaadir, ayaa maanta xaqiijiyay in Degmadaasi laga tuuray madaafiic Khamiistii lagu weeraray Madaxtooyada Somaliya, balse ku soo hoobtay goobo ku dhow dhow Madaxtooyada.
Madaafiicdan, ayaa ku kala dhacay Xarunta Degmada Wardhiigley iyo xero barakacayaasha ay degan yihiin oo Degmadaasi ku taala, waxaana ku dhimatay saddex qof, halka shan kalana ay ku dhaawacantay.
Gudoomiye Ku Xigeenka Dhinaca Ammaanka Degmada Boondheere, Axmed Maxamed Caynte, ayaa shaaca ka qaaday in madaafiicdaasi laga tuuray Degmadaasi, xilli masuuliyadda madaafiicdaasi ay Al Shabaab sheegatay.
Gudoomiye Ku Xigeenka, ayaa yiri “Waxaan rabnaa inaan idinla qaybsano dareenka ah in aan aad uga xunahay in maalin cad inta hoobiye la soo qaatay ee la soo tuuro, ay ku dhacaan dad nabad iyo ku shaqaynayaan deganaan.”
“Waxaan is xusuusinaynaa in meesha laga soo tuuray inay dheereen ay tahay Degmada Boondheere. Degmada Boondheere iyo Warta Nabadana laba tallaabey isu jiraan. Maaha wax cajiib ah in maanta qof intuu soo baxo nabadda asagoo carqaladeynaaya uu inta meel yimaado uu wax ka tuuro.”
“Hoobiyaha markii la tuuraayay waxay ahayd waqti ciidamadu ay hawlgal ku jiraan, oo ay jiraan meelo dhaadheer. Booliska waa maqnaa, waduu xiraayay u fiirsada, booliskii wado xirid ayuu ku mashquulsanaa la rabay inay ka shaqeeyaan degmada dhexdeeda. Hay’adihii ammaanka way mashquulsanaayeen, hooyooyinka iyo dadkuna gacmahooda kuma celin karaan nin qaswada ahoo, oo hubeysan, iyadoo la kala maqan yahay ayay ka faa’iideysteen. Meeshaas waxaan rabaa inaan idinka tuso, in shacabku uusan jiifan, habeen iyo maalin-na ay ka shaqeeyaan nabadda.”
Caynte, ayaa sheegay inay wadaan qorshe cusub oo lagu magac-daray (U qaas ah) oo lagu tijaabinaayo Degmooyinka Boondheere & Wardhiigley, si ay dadka deegaanka kaga wada shaqeeyaan nabadda.
Hadalkan, ayuu Caynte ka sheegay kulan baroordiiq ahaa oo loo sameeyay dadkii ku dhintay, kuna dhaawacmay madaafiicdaasi, oo maanta lagu qabtay Degmada Wardhiigley.